Andron’ny Zon’olombelona: Miaro Ny Fahalalam-pitenenana, Amin’ny Aterineto Sy Ivelan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Desambra 2012 4:37 GMT
Mankalaza ny Ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona (UDHR), izay nankatoavina tamin'ny 10 Desambra 1948 ny Andron'ny Zon'Olombelona [Human Rights Day]. Nanatontosa horonantsary momba ny zon'ny olona rehetra mba “hahatonga ny feon'izy ireo ho heno eny amin'ny fiainam-bahoaka sy ho tafiditra amin'ny fanapaha-kevitra ara-politika “ ny firenena Mikambana tamin'ity taona ity,” lohahevitra mifandraika indrindra amin'ny Aterineto sy ny fahefan'olo-tsotra avy amin'ny fahafahan'ny vahoaka mifandray sy mifanakalo hevitra amin'ny fampiasana fitaovam-pampitam-baovao vaovao.
Hoy ny andininy faha-19 amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona:
Manan-jo haneho hevitra sy hiteny an-kalalahana ny tsirairay; anisan'izany zo izany ny fahafahana manana hevitra tsy misy fitsabatsabahana ary ny fahafahana mikaroka, mahazo ary manaparitaka vaovao sy hevitra amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao ka tsy ijerena sisintany.
Azo tsapain-tanana fa nahay nitsinjo mialoha ireo mpamolavola ny UDHR mba hiarovana izany fahalalahana izany izay tsy miankina amina fitaovana– fantatsika ankehitriny fa tena sahaza tokoa ny Andininy faha-19 amin'izao vanim-potoana nomerika izao. Amin'ny vanim-potoana web 2.0 izay, maka dikany vaovao ny zo “hanaparitaka” vaovao sy hevitra, satria ireo habaka tambajotra sosialy sy ny sehatry ny bilaogy no manampy ireo mpiserasera tia mamoaka votoaty ary mamela ny tsirairay hiditra amin'ny aterineto hizara eritreritra sy hevitra. Torak'izany ihany koa ny zo “hikaroka” sy “handray” vaovao no nahatsinjovana mialoha ny mili-pikarohana, ny famahanan'ny Twitter ary ireo tolotra hafa amin'ny Aterineto.
Mampiasa hatrany ny UDHR sy ny tahirin-kevitra hafa ireo mpiaro ny zo nomerika manerantany rehefa mandrisika fa tokony hanaja ny zon'olombelona mpikirakira ny Aterineto ny governemanta – indrindra ny zo hanana fiainana manokana, fahalalaham-pitenenana ary ny hahazo vaovao amin'ny Aterineto – raha tiany ny hanohana sy hiaro ny habaka misokatra.
Filoha mpitantana ny ICANN, Fadi Chehade nanao kabary nandritra ny lanonana fanokafana ny WCIT 2012, avy amin'ny mpisera Flickr itupictures ny sary.
Raha te hianoka ny tombony azo amin'ny fanabeazana ny maha-olompirenena, fampiaranana, politika, ary toe-karena avy amin'ny aterineto misokatra isika, tsy maintsy afangaroharo tsara ao anatin'ny teknolojia ny zon'olombelona sy ny politika izay manjaka aminny fampiasana azy hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy omena vahana mba hahatonga ny aterineto hisokatra sy hitondra fihavaozana ny ny mpandray anjara manandanja rehetra – toy ny manampahaizana manokana momba ny teknolojia sy ny lalàna, orinasa, governemanta, ary ny mpiaro ny zon'olombelona amin'ny fampidirana amim-pitandremana ireo zo ireo any amin'ny sehatra mangarahara .
Hatramin'ny SOPA mandalo ny ACTA ka tonga amin'ny WCIT, efa hitantsika ny olona manereana izao tontolo izao mitaky ny fomba fanaovana politika mangarahara ka mety hisy fiantraikany amin'ny adi-hevitra momba ny hoavin'ny aterineto mandeha amin'izao fotoana izao ny feony, heviny, ary ny fanadihadiana lalina avy amin'izy ireo. Ny lohahevitra ankehitriny manao izay handrenesana ny feon'ny vahoaka amin'ny fisokafana ary mampahatsiahy ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny aterineto ny herin'ny fanolora-tena sivika mandritra ny vanim-potoana nomerika.
Ity dia kinova somary niova avy ao amin'ny bilaogin'ny Center for Democracy & Technology. Ny lahatsoratra nangalana azy dia azonao jerena ato.